Fiangonana Apokalypsy Ambatolampy - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Fiangonana Apokalypsy Ambatolampy
29 septembre 2011 admin
Tao aorian’ny vavaka maro samy hafa sy ny fiderana an’Andriamanitra dia nitondra ny tenin’Andriamanitra ny Pasitera, nalaina tao amin’ny Joba 4 :1-11 sy Matio 11 :20-30 ary Galatiana 5 :19-26.
Tao amin’ny filazan-tsara araka an’i Jaona 9 :1-5 manao hoe : « ary raha nandalo Jesosy, dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianany nanontany Azy hoe: Raby ô, iza moa no nanota, io lehilahy io va, sa ny ray aman-dreniny, no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe: Tsy io lehilahy io no nanota, na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan’Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin’izao tontolo izao Aho, dia fahazavan’izao tontolo izao. » no nitondrany ny famelaberana ny toriteny.
Midera azy vita bacc!
Fahombiazana tanteraka ny hetsika fiderana an’Andriamanitra nitondra ny lohateny hoe “Midera azy vita BACC” niarahana tamin’ny tarika VHF (Vavaka Hira Fiderana) sy ny tarika Pray’f ary les Adelines. Ny rantsana Tanora Oliva sy ny tanora mpadalina soratra masina ary ny groupe Pray’f (tanora mpihira eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy) no nanomana izany hetsika goavana izany.
Seminera ho an’i Lehilahy
Manomboka ny alarobia 21 septambra 2011 ho avy izao kosa no hotanterahina ny seminera nasionalin’ny Samaritana Tsara Fanahy eo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Seminera izay hanasana ireo lehilahy kristianina Apokalypsy rehetra eto Madagasikara. Ao Antsirabe no hotanterahina izany fotoana izany ary haharitra 3 andro
Publié dans Ireo Vaovao, Vaovao SamihafaÉtiqueté avec ambatolampy
Famaranana seminera Antsirabe